नतिजा त आउन दिनुपथ्र्यो । जित हुन्थ्यो भने त्यसको श्रेय लिन सक्नुहुन्थ्यो ।
राहुललाई कुर्सी सुम्पिने चटारो किन ?
गुजरातको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यति चटारो किन गरिँदै छ ? कमसेकम यसको नतिजा त आउन दिनुपथ्र्यो । यदि तपाईंको जित हुन्थ्यो भने त्यसको श्रेय लिन सक्नुहुन्थ्यो । जित्न नसकेको अवस्थामा पनि हामी एक नयाँ रणनीतिसाथ आउँछौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।
राहुल गान्धी छिटै कंग्रेस अध्यक्ष बन्न सक्छन् । यद्यपि, अहिले पार्टी अध्यक्ष पदको निर्वाचन बाँकी नै छ । तर, राहुलको नाममा लालमोहर लगाउन मात्र बाँकी भएको मानिँदै छ ।
कंग्रेसमा जहिल्यै नेहरू–गान्धी परिवारको वर्चस्व रहँदै आएको छ । त्यसैले, यस्तो खबरबाट कसैलाई कुनै हैरानी भइरहेको छैन । तर, गुजरात निर्वाचनको मुखमा राहुल गान्धीलाई पार्टी प्रमुखको कुर्सी सुम्पिन किन यति धेरै चटारो देखाइँदै छ, यो प्रश्न भने सबैको मनमा उठिरहेको छ ।
मात्र बिजेपीले राहुललाई नेता मानिरहेको छ
आजदेखि होइन, मनमोहन सिंहको समयदेखि नै ‘डिफ्याक्टो’ त राहुल गान्धी थिए नै । अब विधिवत् भएपछि थोरै अन्तर त पक्कै आउनेछ । किनकि, सोनियाका बफादार अरू नै रहेका थिए । जब कुनै नयाँ पिँढी आउँछ, तब उसले आफ्नै हिसाबले सल्लाहकार चुन्छ । यस्तो अवस्थामा यसबाट परिवर्तन त पक्कै आउँछ नै । तर, कांग्रेसमा आज पनि यस्तो स्थिति छ कि राहुल गान्धीबाहेक विकल्प पनि छैन ।
कांग्रेसम जहिल्यै यो मान्यता रहेको छ कि गान्धी–नेहरू परिवारबाट कोही छ भने ऊ ठीक छ, ऊ मान्य छ नत्र हरेकले यही सोच्ने गरेको पाइन्छ कि मचाहिँ किन नहुने ? इमानदारीपूर्वक हेर्ने हो भने राहुल गान्धीलाई आज पनि केवल बिजेपीले नेता मान्ने गरेको छ । नत्र, अरू कोही कसैले अबसम्म भनेका छैनन् कि २०१९ का लागि राहुल गान्धी हाम्रा नेता हुनेछन् । न मुलायम सिंह, न मायावती, न त लालु यादवले नै यस्तो भनेका छन् ।
यति चटारो किन ?
मुक्तिबोधको एक लाइन छ— सबै गडबडी यसकारण हुने गर्छ कि गलत समयमा झगडा गर्छन् र गलत समयमै झुक्छन् । मैले कंग्रेसको टाइमिङ बुझ्न सकिरहेको छैन । जब गुजरातको निर्वाचन यति निकट छ भने यति चटारो किन गरिँदै छ ? कमसेकम यसको नतिजा त आउन दिनुपथ्र्यो । यदि तपाईंको जित हुन्थ्यो भने त्यसको श्रेय लिन सक्नुहुन्थ्यो । जित्न नसकेको अवस्थामा पनि हामी एक नयाँ रणनीतिका साथ आउँछौँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।
राहुलले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति गुजरातमा लगाइराखेका छन् । यस्तो मौकामा जब गुजरातमा मतदान हुन गइरहेको छ, तब किन यस्तो निर्णय लिइँदै छ ? यो मेरो बुझाइभन्दा निकै परको विषय हो । यद्यपि कंग्रेसले आफ्नो अध्यक्ष कसलाई बनाउँछ र कसलाई बनाउँदैन, यो उसको आन्तरिक मामिला हो । यसमाथि भाजपाले केही पनि भन्न मिल्दैन ।
भाजपालाई कंग्रेसबाट मात्र खतरा
भाजपाले यो बुझ्नु जरुरी छ कि भारतमा कुनै विपक्षको उपस्थिति चल्न सक्छ भने त्यो कंग्रेसको छातामुनि नै चल्न सक्छ । नरसिंह रावदेखि लिएर मनमोहन सिंहसम्म कहिल्यै पूर्ण बहुमतको सरकार थिएन, बहुमत प्राप्त सरकार नभए पनि कंग्रेसको छातामुनि त्यो चलिरह्यो ।
क्षेत्रीय पार्टीका छातामुनि बन्ने सरकारले कहिल्यै पाँच वर्ष पूरा गरेका छैनन् । यसैले भाजपालाई क्षेत्रीय पार्टीबाट डर छैन । तर, २००४ मा जस्तै कंग्रेस आयो भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि ऊ लामो समयसम्म मैदानमा अडिनेछ ।
कंग्रेसको अत्यन्त कमजोर अवस्था
भाजपाको कंग्रेसमाथि आक्रमण जारी राख्ने र उसलाई आफ्नो छातामुनि बाँकी साना पार्टीलाई गोलबन्द गर्नलायक नै नरहने गरी कमजोर बनाउने रणनीति छ । र, आज लगभग कंग्रेसको अवस्था त्यस्तै नै भएको छ । पश्चिम बंगाल, बिहारदेखि लिएर यहाँसम्म कहीँ पनि कंग्रेस यस स्थितिमा छैन कि उसले कसैलाई हाम्रो छातामुनि आऊ भन्न सकोस् । तमाम राज्यमा ऊ तेस्रो या चौथो नम्बरको पार्टी बनेको छ ।